एक tectonic पारी जानकारी को निर्देशक र रूस Mariey Zaharovoy, धेरै गडबड र पनि लगभग सबै विदेशी च्यानलहरू चौंका को विदेशी मामलाहरु मंत्रालय को प्रेस विभाग द्वारा को घटना संग मध्य पूर्व समस्या को तुलना। यसको बयान मा मात्र एक चुनौती पनि संयुक्त राज्य अमेरिका र नाटो विरुद्ध खतरा देखे।
पाठकहरूका हेर्न छैन फिलिम "San Andreas दोष", यस लेखमा यो tectonic पारी र कसरी आज राजनीतिक फेरबदल गर्न यो अवधारणा लागू गर्न भनेर विस्तृत बताउँछन्। यो घटना मानिसजातिको कसरी खतरनाक, यसलाई नजिकको apocalypse को संभावना गर्न संसारमा छ कि भारी ब्याज बताउँछन्।
यसको घटना लागि कारण एक tectonic पारी पाठ्यक्रम मानिन्छ र प्रकाश स्लीपरहरुको supervolcanoes र तेस्रो विश्व युद्ध, एक आणविक जाडो पछि, र,। मानिसजातिले राजनीतिज्ञ को मुख बाट दिइएको जियोलोजिकल क्षेत्र संग पनि एक सरल तुलना संसारको मिडिया मा एक विशाल प्रभाव प्राप्त, आफ्नो भाग्य बारेमा यति चिन्तित छ।
Geologists सजिलो शताब्दीपछि पनि सहस्राब्दियों को वर्णक्रम देखि लेखएको इतिहास पढ्न। तिनीहरूलाई हामी मरुभूमिमा विशाल जम्मा को बलौटे soils इङ्गल्याण्ड को दक्षिण मा राखिएको भनेर थाहा, अन्टार्कटिका मा, पुरातन विशाल फर्न को रहलपहल फेला, र अफ्रीका मा - यो स्पष्ट संकेत ग्लेसियर कवर। यो भूवैज्ञानिक epochs परिवर्तन र जलवायु कि सुझाव। स्थानांतरण tectonic प्लेट खरानी आउन वर्ष माथिल्लो वातावरणमा बढ्दो, सूर्य ओझेलमा, ज्वालामुखी गतिविधि बढ्यो, त्यहाँ एक लामो जाडो थियो। बरफ उमेर धरती सबै जीवन को सबै भन्दा हत्या गरेका छन्। उदाहरणका लागि, पछिल्लो हिमीभवन पछि मात्र चरा प्रजाति भन्दा कम पन्ध्र प्रतिशत छ, र यो आज आफ्नो विविधता कल्पना गर्न कठिन छ - यसको पूर्व वैभवशाली एक pathetic शेष।
त्यहाँ एकदम केहि एकदम वैश्विक परिवर्तन को लागि प्रत्येक अन्य वैज्ञानिक व्याख्या फरक छन्। तिनीहरूलाई को एक, सबै भन्दा साधारण र सबै भन्दा निश्चय गरिदिने, को महादेशमा स्थिर छैनन् भनेर सुझाव। यो एक tectonic पारी के अर्थ एक सरल उदाहरण स्पष्ट देखाउँछ। तपाईं पश्चिम अफ्रिका दक्षिण अमेरिका को पूर्व बनाउन भने, तिनीहरूले वस्तुतः कुनै अंतराल उपयुक्त छन्। त्यसैले तिनीहरू सधैं अटलांटिक महासागर साझेदारी छैन। उदाहरण धेरै छन्। र वास्तवमा संयुक्त राज्य अमेरिका एक भयानक tectonic फेरबदल सामना गर्नेछ - यो मुख Marii Zaharovoy खतरा बाहिर छैन। यो प्रतिज्ञा को प्रकृति छ। र, हलिउड र सिनेमा पनि जहाँ विश्व, को आसन्न अन्त बारेमा फिलिमहरु को धेरै सयौं भर छ किनभने जलवायु हतियार कारण जान्छ, त्यसैले अमेरिकी एकदम पक्रनु र आसन्न खतरा बुझ्छु।
यो घटना को परिभाषा लामो समय र सटीक लागि दिइएको छ: यो दोष पृथ्वीको पाप्रो अन्तर्गत एकल ठोस कन्टिनेन्टल प्लेट छ। के tectonic प्लेट को मानवता गल्तीलाई खतरनाक? पनि एउटा सानो ब्रेक ग्रह श्रृंखला प्रतिक्रिया कवर, एक: यो परिदृश्य निम्नानुसार छ। आफ्नो विशाल वजन दबाब देखि पग्लियो ग्लेसियर जारी थाली, को पाप्रो सागर पानी gush गल्तीलाई को bowels मा, उठ्नेछ। बारेमा बाह्र सय डिग्री सेल्सियस - magma को पाप्रो तातो मुनि। basalt धूलो र ग्याँस संग जोडे ठूलो शक्ति संग हुनेछ र सार्वभौमिक जमीन बाहिर निकालेको। वर्षा सुरु - बाढी गर्न, अभूतपूर्व akin। एक र सबै - ज्वालामुखियों उठाउनका। कि indescribable सुनामी ग्रह को अनुहार बाट सबै टाढा बह पछि। तपाईं कहाँ पाउन भने सुरु देखि पर्याप्त समय दिइएको भंग eruptions गर्न सम्पूर्ण लेआउट, तपाईं पनि भाग्नु गर्न सक्नुहुन्छ। घण्टा देशमा खाली एक कुरा मा एक सुनामी को सुरू भएपछि।
हाम्रो महाद्वीप दुई सय मिलियन वर्ष पहिले गठन Inhabited, Pangea विभाजित - giperkontinent। भागे आवारा दोश्रो देखि लगभग बराबर दूरी मा "तल बसे", तर अझै पनि आपसमा आकर्षित छन्। वैज्ञानिकहरूले केही पचास लाख वर्ष पछि, तिनीहरूले reunited कि भविष्यवाणी। पछिल्लो शताब्दीको 70s मा महादेशमा को इरादा आन्दोलनहरु को एक मोडेल सिर्जना गरेको छ। यो प्रशान्त प्लेट उत्तर अमेरिकी tectonic प्लेट तिर एकदम चाँडै उत्प्रेरित गर्छ कि बाहिर जान्छ। सान Andreasky tectonic पारी बस दुई प्लेट को जंक्शनमा खतरनाक। त्यहाँ बारम्बार भूकम्प विनाशकारी शक्ति सबै सैन र लस एन्जलस एक सय वर्ष पहिले भयो कि छन्। अमेरिका Marii Zaharovoy शब्दहरू भने रूस अमेरिकी tectonic फेरबदल खतरनाक रूपमा कथित थिए किन जो छ, जियोलोजिकल प्रकोप को डर छ। के ठीक विभाग निर्देशक चाहनुभएको छ?
इतिहासको प्रश्न गर्न
निस्सन्देह, यो खतरा बारे चेतावनी थियो, तर "भयानक tectonic फेरबदल" (Zakharova उद्धरण) प्रतिज्ञा रूस को भाग मा। तिनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका सिरियाको नेता Assad, एक इस्लामी राज्य संग युद्ध मा छ जो परिवर्तन मा जिद्दी हुनेछ घटनाको आउँदैन। त्यसपछि अनिवार्य कट्टरपंथी Islamists र आतंककारीहरूले अमेरिका पहिले नै intimately परिचित छ कि बृद्धि आउँछन्। इराक र 2011 को लिबिया मा वर्ष को 2003 घटना (सद्दाम Hussein र Muammar गद्दाफी को गिरावट पछि) आफु को लागि कुरा। इस्लामी राज्य अनिवार्य razrastotsya र धेरै बलियो हुन्छन्। बारेमा यो निरन्तर रूस को विदेश मंत्रालय इंगित गर्दछ कि छ। त्यसपछि आतंकवाद को लहर, र राम्रो तरिकाले जो तिनीहरूलाई संग tectonic फेरबदल बोक्न जोखिम, अधिक हुन सक्छ। Zakharova भर्खरै भनिएको थियो, र निष्कर्ष बिल्कुल गलत पछि थिए।
2016 मा मध्य पूर्व स्थिरता प्राप्त गर्न, त्यहाँ नकारात्मक फेरबदल जारी गर्दै: सिरिया मा रक्तपात, लिबिया मा स्थिरीकरण को कमी, इराक मा कुर्दिस स्वतन्त्रता, येमेन द्वन्द्व worsened को दंगे, विद्रोहीहरूको साउदी अरब अर्थव्यवस्था थप र थप गम्भीर झटका लागू गरिन्छ र धेरै वर्ष को लागि देश को वित्तीय स्थिति सैन्य सञ्चालन प्रमुख, गया मध्य पूर्व मा द्वन्द्वमा संलग्न दक्षिण सुडान। यो मध्य पूर्व देखि छ र नीति सबै tectonic फेरबदल आउने। सबै संकट अर्थमा अवस्था छ, र यो संकट अराजकता, तेजी विस्तार छ बढ्दै, शरणार्थी को छालहरू यो सुरक्षा र एक विशाल समस्याको एक खतरा बनाउन, युरोप बह। वर्ष समाप्त, र कुनै पनि निर्णय यसलाई ल्याए छैन। आतंककारीहरूले विरुद्ध अन्तिम bulwark भने - "एक तानाशाह" Bashar Asad आफ्नो हतियार पल्टिने, 2016 मा "tectonic फेरबदल" सारा संसार overwhelm थियो।
Daishev, इलाकाहरू मुक्ति शुरुवात बावजुद, आफ्नो सैन्य क्षमताहरु वृद्धि गर्न, र यसको अमेरिकी समर्थन र प्रकाश को एक गठबन्धनको काम गरेन संग इराकी सेना मा Mosul को उपनगर मार्फत हिंड्न जारी छ। आतंकवाद को खतरा यसलाई बढ्दै छ, र यसैले एक वैश्विक मात्रा सेना मा एक विशेष, साँच्चै गम्भीर प्रयासहरु, दुष्ट पूरा विजय लागि यो संघर्ष एकताबद्ध आवश्यक मात्र सफाया गरिएको छैन छैन। संग एकदम यसलाई कम अमेरिकी को कम स्तर, मध्य पूर्व अवस्थामा प्रभावित। विशेष क्षेत्र आफ्नै देश को सम्भावित र अवसर कमजोर बनाइरहेका भने हालको प्रशासन, बाहिर चलिरहेको छ, स्वीकार गर्न अब सम्भव छ संयुक्त राज्य अमेरिका कि - मध्य पूर्व नेतृत्व मा एक खेलाडी। र सरकारको परिवर्तन त्यहाँ अमेरिका मा tectonic फेरबदल सुरु गर्ने क्षमता छ (र यो भूवैज्ञानिक गल्तीलाई बारेमा होइन) वातावरण मा स्थान लिन्छ।
तर 2016 मा मध्य पूर्व मा रूस निकै साझेदार, मिश्र, इजरायल र बाहरेन सहित को दायरा विस्तार, टर्की संग सम्बन्ध पत्र गर्न (साउदी अरब साथ प्राप्त गर्न व्यवस्थित पनि साथ) कच्चा तेल OPEC गरेको अपेक्षाकृत सीमित स्तर संग, सहमत सिर्जना गरेको कतार संग सहयोग प्रगति, एक चलाउनु कारण । यो क्षेत्रबाट संयुक्त राज्य अमेरिका displacing सिरिया मा स्थिति समाधान गर्न नयाँ टोली गठन गरेको छ। यसलाई इरान, टर्की र रूस छ। VKS रूस गम्भीर सिरियाली सेना को आतंककारीहरूले पराजित गर्न मद्दत गर्छ। हैलाब जारी। यो सबै विशुद्ध रूसी राजनीतिक विजय रूपमा विश्व मानिन्छ। किन यति उज्ज्वल छ र colorfully tectonic फेरबदल को मारिया Zakharova भने यो छ। साझेदार यस्तो को हानि, Bashar Assad, शून्य विजय हुनेछ। विशेष गरी पुलिस महानिरीक्षक पूर्ण bloodless छैन गर्दा, हाम्रो राजनयिकहरुलाई को वर्तमान स्थिति एकदम अस्थिर देखिन्छ।
क्रिमीआ र मध्य पूर्व
एक सानो त्यहाँ धेरै छन् किनभने जानकारी प्रत्येक दिन, फिर्ता जियोलोजिकल गल्तीलाई र कन्टिनेन्टल प्लेट को प्रश्न गर्न, जरुरी राजनीतिक समस्या बाट आराम गर्न र कहिलेकाहीं यो सबै विश्वसनीयता बाबजुद, एक जिज्ञासा जस्तो देखिन्छ। पृथ्वीको पाप्रो गहिरो भूवैज्ञानिक तहहरू अध्ययन विभिन्न देशहरूमा देखि वैज्ञानिकहरु मध्य पूर्व परिणामस्वरूप tectonic प्लेट एक पारी, प्रकट, र tectonic गतिविधि छिमेकी क्षेत्रहरु अवलोकन छ।
को विज्ञान को रूसी एकेडेमी अलेक्जेन्डर Ipatov को सदस्य नवीनतम विश्वसनीय अनुसन्धान परिणाम (लागू खगोल विज्ञान सहित) घोषणा। अनुभूति: क्रिमीआ प्रायद्वीप बिस्तारै रूस नजिक सार्दा छ। यसलाई टर्की वा ग्रीस, क्रिमीआ र घर पठाइएको जियोलोजिकल tectonic बदलाव प्लेट floated छैन। को मुख्य भूमि गर्न प्रायद्वीप को बैठक, तथापि, यति चाँडै, वर्ष लाखौं दसौं, प्रतीक्षा हुनेछ हुन छैन। तर गणतन्त्र सँगै भेट र 2014।
विश्व राजनीति र यसलाई मा tectonic फेरबदल
पछिल्लो वर्ष को परिणाम पूर्ण हुन सक्छ जब मात्र यो संयुक्त राज्य अमेरिका को नयाँ प्रशासन को आगामी नीति बाहिर जान्छ हुनेछ - र मध्य पूर्व, र सामान्य मा - विश्व। तथापि, इस्लामी दुनिया र पश्चिम बीच विरोधाभास चाँडै निर्मूल गर्न असम्भाव्य छ, र xenophobia वृद्धि जो, को पाठ्यक्रम, दुवै इस्लामी र गैर-इस्लामी दुनिया को सम्बन्ध को सम्पूर्ण प्रणाली विष गर्न सक्षम, अझै पनि पक्कै जारी छ। सबै वर्ष हामी आफ्नो मूल्य मा tectonic फेरबदल गर्न एकदम समान थिए जो, विश्व राजनीतिमा अत्यन्तै परिवर्तन देखेको छ।
सबै को पहिलो, उल्लेख राम्ररी विश्व Brexit मिलान ब्रिटेन युरोपेली संघ छोड्ने निर्णय गर्दा गरिनु पर्छ। यो छ जो केवल कुनै एक योजना बनाएका थिए संयुक्त राज्य अमेरिका, अचानक पहिरो डोनाल्ड ट्रम्प गरेको राष्ट्रपति चुनाव को विजय पछि भएको थियो, तर घटनाहरू यस पालो बारेमा slightest विचार स्वीकार गरेनन्। हामी यो धेरै प्रयास दायाँ र थप्न भने रूढिवादी सेना युरोप मा (विशेष गरी फ्रान्स र जर्मनी मा), प्रगति पहिले नै अपरिवर्तनीय, देखेको 2017 मा उनि आफ्नो विकास रोक्न असम्भाव्य छन्।
संसारको सम्पूर्ण पश्चिमी भाग को मूल्य सीमा अनपेक्षित नयाँ टोन थप्दा, अधिक वैविध्यपूर्ण समाज को मनोभावहरू को दायाँ-भाग, रूढिवादी populist र राष्ट्रवादी लहर गरे प्यालेट देखि निकै सारे छ। विरोध भावनाहरू पनि जहाँ तिनीहरू यो एकदम uncharacteristic छ देशहरूमा, कहिल्यै गरिएको छ, देखिन्छन्। लेख्न , एक "रंग क्रान्तिको" पश्चिमी युरोप मा शासन को आकस्मिक परिवर्तन मा, संयुक्त राज्य अमेरिका मा सुरु। विश्व राजनीति , अप्रत्याशित बन्ने छ नयाँ, अझै छैन बुझ्न आवश्यक छ कि घटनाहरू र घटना को मामला भरिएको।
संसारको राजनीतिक प्रणाली को गुरुत्वाकर्षण को केन्द्र स्पष्ट बदलता छ। बलियो एशियाली देशहरूमा चीन र भारत को असाध्यै उच्च विशिष्ट वजन उठ्नुभयो। त्यसैले, नीति यो tectonic पारी को मुख्य षड्यन्त्र फैलाउनु हुनेछ अधिकांश मा चीन र अमेरिका सम्बन्ध संभावना। दुनिया मा आर्थिक संकट, यो दिइएको र देशहरू नेताहरूले गाह्रो छ। संयुक्त राज्य अमेरिका को मान्छे शासन पार्टी नीतिहरूको मा व्यापक निराशा द्वारा कवर। रिपब्लिकन एक पहिरो विजय जित्यो किन डेमोक्रेट प्रतिनिधिहरु को घर मा सिटको बहुमत जित्यो र सीनेट मा आफ्नो प्रतिनिधित्व वृद्धि भन्दा छ।
आन्तरिक र बाह्य नीति
ट्रम्प गरेको विजय घरेलू नीति लागि, तर विदेशी नीति मात्र होइन महत्त्वपूर्ण छ। इजरायल स्पष्ट चीन द्वारा प्रोत्साहित गरेको छ फिक्री छ, एशिया उदास र रूस बाँकी अन्दाज लगाउनु। चीन को लागि, यो एकदम सम्भव एक धेरै कठोर स्थिति छ - यसको आफ्नै मुद्रा राख्न नसक्नुको गर्न युआन को कमजोर। यो Afghan युद्ध समर्थन गर्न धेरै सम्भव छ। रिपब्लिकन पनि मिसाइल रक्षा को प्रयोग बारे चिन्तित हुनुहुन्छ।
तपाईं विशेष राजनीतिक जलवायु लागि अब तेल अवीव आशा गर्न सक्छन्, प्यालेस्टाइन प्राधिकरण संग वार्ता को बहाली अनुमति एरिक Cantor - इलिनोइस सीनेटर - मार्क किर्क, तल्लो घर को बहुमत नेता: कांग्रेस एक महत्वपूर्ण वृद्धि समर्थक-इजरायल सेना मा प्राप्त। जनवरी 19, 2017 त्यहाँ भाग्यवस, काल्पनिक थियो जो, 17 अमेरिकी अमेरिका, मा खानी 28 यहूदी केन्द्र को रिपोर्ट थिए: एकै समयमा समर्थक-Israeli सेना (जो व्यक्तिहरूलाई सबै अनुमान तथापि,) को अझै अज्ञात सेना बाट दबाबको महसुस गर्छन्। तर यो पहिलो चेतावनी छैन। र केही बिन्दु मा, खानी गलत हुन सक्दैन।
यसलाई अन्त्य गर्न के रहेको छ
धेरै मानिसहरू अमेरिका को एक स्थिर स्थिति संसारमा बिग्रन र आफ्नो वैश्विक प्रभुत्व लगभग हराएको छ कि लाग्छ। यो सत्य हो? रूसी राष्ट्रपति र यस कूटनीतिक कोर को अनुमान धेरै सतर्क छन्। र, वास्तवमा, 2010, को "Wikileaks" प्रकट र धेरै वृत्तचित्र पत्र को दसौं हजार अमेरिका थैली अनावरण गर्दा सम्झनुहोस्। यसलाई देखिन्थ्यो - राम्रो, सबै कुरा, शक्ति को अन्त। तर केही सबै अमेरिका भएको छ। मित्र, पनि कडा इनलाइन, खो छैन। शत्रुहरू पनि नयाँ वृद्धि भएको छैन, ठाउँमा रह्यो। एक आश्चर्य: कुनै एक डोनाल्ड ट्रम्प को चुनाव विजय पछि भयो यी खुलासे को मास्को आरोप भयो थिएनन्।
हो, ट्रम्प - अन्य। यो अघिल्लो राष्ट्रपति देखि एकदम अलग छ। तर के चिन्ने यो विकल्प, जडानमा रूस गर्न हुनेछ? मास्को वा कुनै पनि Skovorodino देखि हेर्दा, रिपब्लिकन मान्छे अधिक हारे डेमोक्रेट निरन्तर राम्रो र भद्दा दूषण रूस भन्दा हामीलाई व्यावहारिक र कम खतरनाक देखेको छन्। ट्रम्प कति आदेश नै हिलारी क्लिंटन को आदेश भिन्न? विचारशील विश्लेषण पछि, यो दुवै पक्षहरूका कार्यहरू नै मंच lithosphere मा तैनाथ कि स्पष्ट छ। तिनीहरूले धेरै समान टाढाबाट देखि देखेको छ भन्दा हो। र टोली र अन्य बाहिर खतरा intimidating र विदेशी wiles को एक किसिम को तस्वीर पेंट। स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र सम्मान व्यक्तिहरूलाई, प्रतिष्ठा र अर्थव्यवस्था - अन्य, तर, र यो राष्ट्रको कुनै पनि संस्करणमा, बाह्य शक्तिहरू लागि खतरनाक खतरा छ। हिलारी संसार र रूसी populism प्रेम थिएन, र ट्रम्प बहुराष्ट्रीय निगम, मेक्सिको, चीन र विकासशील देशहरुमा रुचि छैन। नीति मा Tectonic पारी अपरिहार्य छ। सायद त्यो किन यति अनुमान र अनुमानहरु हाम्रो राजनयिकहरुलाई को सावधान छ।
अन्डा गठन: सामान्य जानकारी
Mgmt चक्र व्यवस्थापन
अनुहार मा मुखासे: अप क्रीम कसरी ढाक्न? माथि tonalnika बिना अनुहार मा pimples को कसरी ढाक्न?
किनमेल केन्द्र "पार्क हाउस" (Brateevo) को समीक्षा
महिनावारी समयमा सेक्स। आधारभूत nuances र नियमहरू
कसरी आफ्नो कम्प्युटर "Vayber" मा स्थापना: कार्यक्रम को सुविधा र सेटअप प्रक्रिया
कसरी स्क्रिनको स्क्रिनसट, पृष्ठ अर्को महत्त्वपूर्ण वस्तु जाने बनाउने?